14 “O Israel, san bra Yehowa wo Nyankopɔn nkyɛn,+ efisɛ wo bɔne ama woawatiriw.+ 2 Momfa nsɛm mmra Yehowa nkyɛn.+ Monka nkyerɛ no sɛ, ‘Fa bɔne firi+ na gye papa, na yɛde yɛn ano bɛbɔ anantwinini afɔre.+ 3 Asiria rentumi nnye yɛn nkwa.+ Na yɛrentena apɔnkɔ so.+ Yɛrenka nkyerɛ yɛn nsa ano adwuma bio sɛ: “O yɛn Nyankopɔn!” efisɛ wo na wuhu agyanka mmɔbɔ.’+ 4 “Mɛsa wɔn yare afi wɔn atuatew ho.+ Meyi me yam adɔ wɔn,+ efisɛ m’abufuw adan afi no so.+ 5 Mɛyɛ sɛ obosu ama Israel.+ Ɔbɛyɛ frɔmm sɛ sukooko na ne ntini atenetene sɛ Lebanon. 6 Ne mmaa bɛdennan, na n’anuonyam ayɛ sɛ ngodua,+ na ayi hua sɛ Lebanon. 7 Afei wɔbɛtena ne nwini ase+ bio na wɔadua aba; na wɔbɛfefɛw sɛ bobe.+ Na wɔbɛkae no sɛ Lebanon nsã. 8 “Efraim bɛka sɛ, ‘Dɛn bio na me ne ahoni wɔ yɛ?’+ “Na me ara mɛma mmuae na m’ani aku ne ho.+ Mete sɛ ɔpopaw dua frɔmfrɔm.+ Na me so na wubenya aba.” 9 Hena ne onyansafo a ɔbɛte nsɛm yi ase?+ Hena ne ɔbadwemma a obehu?+ Yehowa akwan teɛ,+ na treneefo na wɔbɛfa so;+ nanso mmaratofo bɛwatiriw wɔ so.+